knowdge Archives - Newposts
သင့်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၅)မျိုး…
May 29, 2022 newposts2021 0
သင့်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၅)မျိုး… ကိုယ့်ဘက်က ချစ်နိုင်သလောက်ချစ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်မှန်းသိလို့ အနိုင်ယူပြီး ကိုယ့်အချစ်တွေကို တန်ဖိုးမထားပဲ ပစ်ချခဲ့တဲ့သူမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ ဒီအတွက် ပြိုလဲခံစားမနေပါနဲ့ …။ ကိုယ့်အချစ်တွေကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့သူအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်မခံဘဲ သူတို့တွေနောင်တရသွားအောင် ဒီလိုနည်းလေးတွေနဲ့ တုံ့ပြန်လိုက်ပါနော် …။ (၁) ဂရုမစိုက်ပါနဲ့” ကိုယ်ချစ်တာတွေကို သူတန်ဖိုးမထားမှန်းသိပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ကိုတွယ်ကပ်နေတာထက် ဂရုမစိုက်တာက […]
ဖတျပွီးမငိုမိအောငျ ထိနျးဖတျကွပော့ မိနျးမတို့ရလေို့ပွောရငျး အဆုံးထိဖတျကွညျ့ပါ အမြိုးသမီးဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲအိုမငျးသှားခဲ့တယျ. .
April 21, 2022 newposts2021 0
ဖတ်ပြီးမငိုမိအောင် ထိန်းဖတ်ကြပော့…. မိန်းမတို့ရေလို့ပြောရင်း အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ပါအမျိုးသမီးဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲအိုမင်းသွားခဲ့တယ်. . .မိန်းမရဲ့တစ်သက်ကခက်ခဲတဲ့တစ်သက်ဖြစ်တယ်။ သမီးတော်အဖြစ် အနှစ် ၂ဝ၊မိဖုရားအဖြစ် ၁ရက်၊တော်ဝင်မင်းသမီးအဖြစ် ၁ဝလ၊အထိန်းတော်အဖြစ် တစ်သက်.. ဒါဟာမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ မိန်းမအများစုဟာ ဒီလိုနဲ့ပဲအိုမင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမဟာ ကလေးငယ်ကိုပွေ့ချီထားပြီးနွားနို့ကျိုနေတယ်၊ အဝတ်လျှော်နေတယ်။ဆပ်ပြာတွေပေနေတဲ့လက်နဲ့နဖူးထက်ကချွေးတွေကို သုတ်ရင်း အင်း.. အခုအချိန်မှာကလေးငယ်သေးတယ်၊ ကလေးကြီးလာရင်ငါလည်းအားလပ်ချိန်လေးတော့ရှိလာမှာပါလို့ တွေးတယ်။ ကလေးတဖြည်းဖြည်းကြီးလို့…မူကြိုတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ်။မိန်းမဟာ […]
စတေနာသုခ ဆရာတျော ဘဒ်ဒ န်တ ဣန်ဒကနညျးပေးသော ( ဆီးခြိုအတှကျ ကုနျးသဖနျးသီး ) ဆီးခြို သှေးခြိုပြောကျသောကုနျးသဖနျးသီး ဤဆေးညှနျး ကို ဝိဇ်ဇာကွီးမြားက စတေနာ သုခ ဆရာတျော ဘဒ်ဒ န်တ ဣန်ဒက မှတဆငျ့ ဆီးခြိုသှေးခြို ဝဒေနာစှဲကပျနသေော လူနာတဈဦးကို ရောဂါပြောကျအောငျစားခိုငျးရာ […]
August 23, 2021 newposts2021 0
လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ငွေစုကြည့်ပါ ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်…. အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေါ့ …. တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ် ….ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ ၁ပုံလောက်ပေါ့ ) ….။ တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း […]
August 4, 2021 newposts2021 0
မိန်းမတို့ ဘုန်း ဆံထုံးဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း မိန်းကလေး အများစုဟာ ဆံပင်အရှည်ထား ရတာကို နှစ်သက် ကြသလို မိန်းကလေးတွေ နဲ့ဆံပင်အရှည်ဆိုတာ ခွဲထားလို့ မရတဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုလို သဘောထား သတ်မှတ် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်ကာလ ပြောင်းလဲ လာတာ နဲ့အမျှ မိန်းကလေးတွေဟာ ဆံပင် […]
ဗိုက်ခေါက်ထွက်လို့စိတ်ပျက်နေလား၊ အဆီတက် လို့စိတ် ဓာတ်ကျနေလား ဒီနည်းလေးစမ်းကြည့်ပါ ဝတဲ့သူ ဗိုက်ပူတဲ့ သူတွေ အတွက် ဗိုက်ကျစေမည့် ရှားစောင်း လက်ပတ်ယို လုပ်နည်း… ဝတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်ပူတဲ့ သူတွေ အတွက် အရမ်း အဆင်ပြေတယ်။အိမ်ရှင်မ တော်တော် များများရဲ့ ဒုက္ခက ဗိုက်ပူ တာပါပဲ။ […]